#Ciidamada Xooga oo Gacanta ku dhigay koox Isbaaro u taalay Gobolka Shabeelaha hoose - Get Latest News From Horn of Africa
#Ciidamada Xooga oo Gacanta ku dhigay koox Isbaaro u taalay Gobolka Shabeelaha hoose
Gobolka Shabeelaha hoose oo ah halka ugu badan ee yalaan Isbaarooyinka lacago aan sharci aheyn looga qaado gaadiidka rakaabka iyo xamuulka ayaa waxa howl isbaaro qaadis ah ka sameeyay Ciidamada Dowlada Soomaaliya.
Howl-galkan oo ay hor kacayeen Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Jenaraal, Odowaa Yuusuf Raage iyo Saraakil kale ayaa lagu qaaday Isbaarooyin dhowra oo lagu dhibaateyn jiray Dadka Shacabka ah.
Ciidamada ayaa intii ay howlgalka ku jireen waxa ay gacanta ku dhigeen rag ka mid ah kooxaha Isbaarooyinka dhigta Gobolka Shabeelaha hoose iyo hubkii ay wateen.
Howlgalka ayaa kusoo aadaya ayadoo maalin ka hor degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha hose kormeer ku tageen Taliyeyaasha Ciidamada booliska iyo Milatariga Soomaaliya, kuwaas oo u kuur galayay xaalada amaan ee Afgooye.
Warar ayaa sheegaya in Degmada Afgooye uu ku wajahanyahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo sidaas darteedna ay taliyeyaasha u kormeereen amaanka Degmada.